जसपाले दाहाल-नेपाललाई साेध्याे- तपाईंहरूकाे पार्टी कुन हाे?
नेकपाकाे प्रचण्ड-नेपाल समूहले जसपासँग राखेकाे सत्ता सहकार्यकाे प्रस्ताव नेकपा विवाद टुंगाे नलागेसम्म निर्क्याैल नहुने देखिएकाे छ। आज भएकाे छलफलमा जसपा नेताहरूले दाहाल–नेपाल पक्षको पार्टी कुन हो स्पष्ट पार्नका लागि आग्रह गरेको पनि महतोले बताए। जसपा नेताहरूले पहिले पनि धाेका भएकाे भन्दै 'रिस्क' लिन नचाहेकाे बताए। नेकपा प्रचण्ड-नेपाल समूहले जसपासँग मिलेर जाने प्रस्ताव गरेकाे थियाे।
‘दाहाल-नेपालले सहकार्यको प्रस्ताव राख्‍नुभयो, हामीले तपाईंहरूको पार्टी कुन हो भनेर सोध्यौं’
प्रचण्ड–नेपाल समूहलाई जसपाको प्रश्न : तपाईंहरूको आधिकारिक पार्टी कुन हो ?
जसपा नेताहरूलाई प्रचण्ड-माधवको प्रस्ताव : सहकार्य गरेर अगाडि बढौं
बादलको सांसद र मन्त्री पद गुम्यो, आजै पुनः नियुक्त हुँदै
गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलले मन्त्री तथा सांसद पद गुमाएका छन्। माओवादी केन्द्रले उनलाई पार्टीबाट निष्कासन गरेसँगै राष्ट्रिय सभा सचिवालयले उनको राष्ट्रिय सभा सदस्य पद खारेज भएको सूचना जारी गरेको हो। उनी आजै पुनः गृहमन्त्रीका रूपमा सपथ लिने भएका छन्। उनको ठाउँमा ३५ दिनभित्र पुनः निर्वाचन हुने भएको छ।
छोटकरी विशेष 15 घण्टा पहिले
कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्रले वैशाख मसान्तसम्म विद्यालय बन्द राख्न सिफारिस गरेकाे छ। सीसीएमसीले ठूला सहर र कोरोनाकाे उच्च संक्रमण भएका स्थानका विद्यालय बन्द गर्न सिफारिस गरेको हाे। अन्य ठाउँका विद्यालयबारे प्रदेश र स्थानीय तहले निर्णय लिनसक्ने बैठककाे निष्कर्ष छ। त्यस्तै डान्सवार तथा अन्य हस्पिटालिटीहरू समेत बन्द गर्नुपर्ने भएकाे छ।
त्रिकोणात्मक टी–ट्वान्टी खेलमा नेपालकाे शुरूआती जित
त्रिकोणात्मक २०/२० क्रिकेट शृंखलाकाे पहिलो खेलमा नेपालले नेदरल्याण्डलाई ९ विकेटले पराजित गरेको छ। नेदरल्यान्ड्सले त्रिवि क्रिकेट मैदान, कीर्तिपुरमा निर्धारित २० ओभरमा ४ विकेट गुमाइ १३६ रन बनाएको थियो। नेपालकाे तर्फबाट कुशल भुर्तेल, आशिफ शेखले अर्धशतक प्रहार गरेसँगै नेपालकाे विजयी यात्रा शुरू भएकाे हाे। नेपालले १५ ओभरमै लक्ष्य पुरा गरेकाे हाे।
प्रधानमन्त्री निवासमा सर्वदलीय बैठकः के-के भयाे?
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बाेलाएकाे सर्वदलीय बैठकमा एमसीसी लगायत विषयमा छलफल भएकाे छ। बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले सभामुख अग्नि सापकाेटाले संसदलाई बन्धक बनाएकाे आराेप लगाए। बैठकमा कांग्रेसबाट सभापति शेरबहादुर देउवा, जसपाबाट महन्थ ठाकुर, राप्रपाबाट प्रकाशचन्द्र लोहनी लगायत सहभागी थिए। बैठकमा एमालेका नेता माधवकुमार नेपाल, माओवादी नेता प्रचण्ड भने सहभागी भएनन्।